काठमाडौं, ११ चैत । सिंगापुरको कोरोनासँग लड्ने तरिका संसारका अरु धेरै देशहरूको भन्दा फरक छ । सिंगापुर अहिलेसम्म लकडाउन गरिएको छैन ।
सिंगापुर विश्वका धेरै मान्छे आवतजावत गरिरहने देश हो । कोरोनो उत्पति भएको चीन र हङकङसंग सिंगापुरको बाक्लै सम्बन्ध छ । तर अहिलेसम्म सिंगापुरमा कोरोनाको कारण एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन । २६६ जनामा कोरोना सक्रमण भएको छ । अरु देशको तुलनामा संक्रमण दर ढिलो छ । संक्रमितहरुको पनि सफल उपचार भइरहेको छ ।
सिंगापुरमा यस्तो हुन कसरी सम्भव भयो ? संसारका ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरू कोरोनाविरुद्धको लडाईमा निरिह देखिएको बेला सिंगापुरले यस्तो सफलता कसरी पाइरहेको छ ? सिंगापुर मोडेलले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।
यसको मुख्य कारण हो– प्रकोपको हल्ला चल्ले बित्तिकै सिंगापुरले तयारी शुरुवात गरिसकेको थियो । सिंगापुर सन् २००३ को सार्स प्रकोपबाट महामारी रोकथाम गर्न दक्ष र अनुभवी भएको थियो । वुहानमा कोरानाको हल्ला चल्ने वित्तिकै डिसेम्बरबाटै सिंगापुरले तयारी शुरुवात गरेको थियो । जबकी जनवरीको अन्त्यतिर मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना महामारीको औपचारिक पुष्टि र विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्‍यो ।
फेब्रुअरी लाग्दा नलाग्दै सिंगापुरमा सबै तयारी पूरा भएका थिए । कतिपय देशहरुले अझै तयारी गर्न सकिरहेका छैनन् । सिंगापुरले चीनबाट सूचना प्राप्त गर्न विश्व स्रोतलाई पर्खिबस्दैन । उसले चीनबाट अनेक अनौपचारिक स्रोतबाट सूचना संकलन गर्दछ र त्यही अनुरुपको तयार प्रारम्भ गर्दछ । सिंगापुरले प्राप्त गरेको सफलताको मुख्य कारण भने कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई समुदायमा जान नदिनु नै हो ।
होम क्वारेन्टाइन विधिका अनेक समस्या छन् । त्यहाँ परिवारका अरु सदस्यसंग मिसिएर बस्नुपर्दछ । ट्वाइलेट बाथरुम साझा हुन्छ । घरमा छिमेकी वा पाहुना आइरहन सक्दछन् । सिंगापुरले ठान्यो कि कोरोना संक्रमितलाई घरमा राख्नु हुँदैन । उसले विल्कुलै फरक प्रकारका क्वारेन्टाइन बेड भएको हस्पिटल बनायो र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा त्यही केन्द्रित गर्‍यो । सिंगापुरले कोरोना संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन राख्न पर्याप्त बेडको तयारी पहिले नै गरेको थियो ।
सिंगापुरमा विशेष स्वास्थ्य सेवा टास्कफोर्स क्रियाशील छ । त्यसले सार्वजनिक तबरले ज्वरो जाँच गर्दछ । परिवारलाई सुसूचित गर्दछ । कुनै शंकास्पद व्यक्ति भेटिने बित्तिकै राज्यले बनाएका क्वारेन्टाइन लैजान्छ ।
बिमारीलाई त्यहाँ लगेपछि आफन्त वा परिवारजनको कुनै दायित्व र सम्पर्क हुँदैन । प्रत्येक घरले दिनमा दुईपटक तोकिएका केन्द्रमा फोन गरेर सूचना दिनु पर्दछ अन्यथा मोवाइल एसएमएसले ताकेता गर्दछ । सिंगापुरमा होटल, स्कुल, कलेज सबै सामान्यरुपमा चलिरहेका छन् ।
लकडाउनको छैटौं दिन यस्तो देखियो सिंहदरबार (फोटोफिचर)